यी हुन् ५ तरिका : जसले स्मार्टफोनको ब्याट्री बचाउन सकिन्छ - Unity Khabar
यी हुन् ५ तरिका : जसले स्मार्टफोनको ब्याट्री बचाउन सकिन्छ
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार १६:०३
काठमाडौं ः पछिल्ला दशकमा स्मार्टफोनका फिचरमा धेरै परिवर्तन आएको छ। टच स्क्रिनदेखि बोलेरै चलाउन सकिने टेक्नोलोजी अपडेटले स्मार्टफोनको फड्को कहाँसम्म पुगेको छ भनेर देख्न सकिन्छ।
अहिलेका स्मार्टफोनमा उत्कृष्ट क्यामरा गुणस्तरका साथै ग्राफिक्स भएको गेम र ल्यापटपमा हुने जत्तिकैको स्टोरेज पाइन्छ। हामीले हातैमा सबै सुविधा सहजै पाउन सकिरहेका छौं। तर यस्ता ठूला फिचरले स्मार्टफोनको ब्याट्री पनि धेरै खाइरहेको हुन्छ।
ब्याट्री चाँडै सकिनु अधिकांश स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको मुख्य समस्या हो। दिनभर मोबाइल धेरै नचलाउने हो भने मात्र ब्याट्री केही बचत हुन्छ। हैन भने त सधैं चार्जर बोकेर हिँड्नुपर्छ।
ब्याट्री सकिने समस्याको कुनै दीर्घकालीन समाधान त छैन। तर हामीले आफ्नो फोनको ब्याट्री खपत कम गरेर यसलाई चाँडै सकिनबाट रोक्न भने सक्छौं।
आज हामी तपाईंहरूलाई आफ्नो स्मार्टफोनको ब्याट्री कसरी बचत गर्ने भनेर बुझाउने छौं।
१. सोसल मिडिया एपहरूको ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस अफ गर्नेः
हाम्रा मोबाइलमा भएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता सोसल मिडिया एपहरू चलाउँदा ब्याट्री ह्वात्तै सकिन्छ। हामीले यी एप नचलाउँदा पनि ब्याकग्राउन्ड एपमा बसेर मोबाइलको ब्याट्री घटाइरहेको हुन्छ। यो समस्या कम गर्न हामीले यी एपको ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस अफ गर्नु पर्ने हुन्छ।
एन्ड्रोइड मोबाइलमा एपको ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस अफ गर्न सेटिङमा गइ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन अप्सन सर्च गर्ने। त्यहा मोबाइल भएका एपहरू अप्टिमाइज भएको छ वा छैन भनेर देखाउँछ। यदि एपहरू अप्टिमाइज भएको रहेनछ भने यसले मोबाइल ब्याट्री चाँडै सकाउँछ।
त्यसैले लिस्टमा देखाइएका एपहरूमा क्लिक गरेर अप्टिमाइज बटन क्लिक गरेर ब्याट्री बचत गर्न सकिन्छ।
आइफोनमा भने सेटिङमा गइ ब्याकग्राउन्ड एप रिफ्रेस अप्सन सर्च गर्ने। त्यसमा पनि एपहरूको ब्याकग्राउन्ड एप रिफ्रेस अन वा अफ छ भन्ने देखाउँछ। हामीले ती सबै अन बटन अफ गरेपछि एपहरूको ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस अफ गर्न सक्छौं।
२. डार्क मोड वा डार्क ब्याकग्राउन्ड चलाउन
हाम्रा मोबाइलमा लाइट मोड र डार्क मोड भनिने दुई फिचर राखिएको हुन्छ। लाइट मोडले मोबाइलको डिस्प्ले उज्यालो बनाउँछ र डार्क मोडले अँध्यारो।
लाइट मोडमा मोबाइल चलाउँदा ब्याट्री सकिने समस्या देखिरहेको हुन्छ र यसले आँखालाई पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रयोगकर्ताको आँखा र ब्याट्री बचत गर्नका लागि डार्क मोड वा डार्क ब्याकग्राउन्ड अन गर्नु उपयुक्त अप्सन हुन्छ।
डार्क मोड अन गर्न फोनको सेटिङमा गइ डिस्प्ले अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यहाँ लाइट मोड र डार्क मोड विकल्प देखाइएको हुन्छ, जसमा हामीले डार्क मोड अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्छ।
३. स्क्रिन टाइमआउट घटाउने
हामीले फोनको स्क्रिन टाइम आउट धेरै लामो समयसम्म राखेका छौं भने पनि मोबाइलको ब्याट्री बचत हुँदैन। फोन चलाउँदा चलाउँदै अफ गर्न बिर्सिँदा आफैं अफ हुन लाग्ने समयलाई स्क्रिन टाइमआउट भनिन्छ। हाम्रो फोनको ब्याट्रीको आयु यो स्क्रिन टाइम आउटमा पनि निर्धारण गर्छ।
आइफोनको स्क्रिन टाइम आउट कम गर्न सेटिङको डिस्प्ले एन्ड ब्राइटनेस अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्छ। त्यहाँ अटो–लक अप्सन हुन्छ जसमा क्लिक गर्दा ३० सेकेन्डदेखि पाँच मिनेटसम्म वा कहिले स्क्रिन टाइम आउट बन्द नगर्ने अप्सन हुन्छ। हामीले ब्याट्री बचत गर्न ३० सेकेन्डको अप्सन क्लिक गर्दा हुन्छ।
एन्ड्रोइड मोबाइलको सेटिङमा भने स्लिप अप्सन हुन्छ। हामीले यसमा ३० सेकेन्ड वा कम अप्सनमा क्लिक गर्न सक्छौं।
४. लोकेसन डाटा अफ गर्ने
हाम्रा स्मार्टफोनले वाइफाइ, ब्लुटुथ र जिपिएस प्रयोग गरेर हाम्रो कहाँ छौं भन्ने जानकारी लोकेसन फिचरबाट लिइरहेको हुन्छ। यो फिचरले फोन ब्याट्री पनि धेरै खान्छ। त्यसैले ब्याट्री बचत गर्न हामीले फोनको लोकेसन डाटा अफ गर्नु पर्छ। यसका लागि फोनको प्राइभेसी सेटिङमा गइ लोकेसन अप्सन सर्च गरी त्यसलाई अफ गर्नु पर्छ।
५. लो पावर मोड अन गर्ने
फोनमा हुने लो पावर मोड फिचर अन गरेर पनि हामीले सजिलै ब्याट्री बचत गर्न सक्छौं। लो पावर मोड अन गरेपछि फोनले अटोमेटिक स्क्रिन ब्राइटनेस कम गर्छ, रिफ्रेस रेट घटाउँछ र एपको ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस पनि अफ गर्छ।
लो पावर मोड अन गर्न फोनको सेटिङमा गइ ब्याट्री अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यहाँ लो पावर मोड वा ब्याट्री सेभर भन्ने अप्सन देखाइएको हुन्छ। त्यसलाई अन गरेपछि ब्याट्री बचत हुन्छ।
पत्रकार बिष्ट र मोडेल रानीको ‘दिल जलेनी’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक (हेर्नुस् भिडियो)
अनुप विक्रमको ‘तिमी बिना बाँच्नै गाह्रो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सुर्यविरहीले ल्याए ‘सुनै फल्न्या देश’ (भिडियाे)
पत्नी र छोरीलाई दुबईमा लुकाएकोबारे सलमानले खोले मुख दिए यस्तो जवाफ
पाटनका उपप्रमुख बोहराद्वारा काठको कुर्चीबाटै जनतालाई सेवा !
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:०७
पूर्वमन्त्री बोहराको गृह पालिका परशुराममा एमालेको…
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २१:३६
परशुरामका मेयर र उपमेयरको कर्मचारीलाई निर्देशन–जनमुखी रूपमा…
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १९:२९
प्रवासको राजनीतिबाट उदाएका पार्की बने आलितालको अध्यक्ष
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १४:१२
केशव बोहरा भन्छन्– परशुराममा चरम अन्तर्घातले एमालेको हार भयो
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १९:५५
अमरगढीमा नगरप्रमुख जोशी र उपप्रमुख झुकालले गरे पदबहाली
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १९:३८
निवर्तमान मेयर ओझाको सम्पति : ४ ठाउँमा घरेडीदेखि…
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १९:२९